Global Voices teny Malagasy » Tsy Mifanaraka Amin’ny Lalàmpanorenana Ny Lalàna “Mangeja” Ny Media Ao Timor Atsinanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Septambra 2014 3:08 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Timor Atsinanana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Nahazo fandresena ampahany ireo mpanoratra gazety sy vondrona mpiaro ny zon'olombelona avy ao Timor Atsinanana raha namoaka didy ny Fitsarana Ambony fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny Lalàna mifehy ny gazety  nolanian'ny parlemanta tamin'ny volana Mey lasa teo.
Manohitra  ny lalàna izay sokajian'izy ireo ho fangejana ny fahalalaham-pitenenana ny vondrona mpikatroka sy ny media. Notanisain-dry zareo  ny fehezan-dalàna maromaro “mampidi-doza” sy “mivelatra” mankany amin'ny mety ho fanohintohinana ny fahalalahan'ny fampitam-baovao tahaka ny politika vaovao mitaky amin'ireo mpanao gazety hisoratra anarana sy hoarahin'ny Vaomieran-gazety maso, ary koa ny lalàna mitaky fahazoan-dalana ho an'ny vahiny mpanoratra gazety. Nampitandrina izy ireo fa mety hametra ny anjara toeran'ny olon-tsotra mpanoratra gazety sy ireo tsy nahazo fankatoavana amin'ny fomba ofisialy ho mpikambana amin'ny tontolon'ny gazety ny lalàna. Nampangain'izy ireo ihany koa ny fepetra tafahoatra amin'izay zavatra ataon'ny mpanoratra gazety vahiny ny fehezan-dalàna.
Tamin'ny herinandro lasa, nanafoana  fehezan-dalàna maromaro izay tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny Fitsarana Ambony, tahaka ny andinin-dalàna faha-20, izay mamaritra ny adidin'ny mpanoratra gazety, ny andinin-dalàna faha-24 mikasika ny renivola vahiny ary ny andinin-dalàna faha-40 mikasika ny resaka onitra ho an'ny fampitam-baovao. Naverina hodinihana sy hasiam-panovana any amin'ny parlemanta indray ilay lalàna.
Na dia nambara fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana aza ilay lalàna, tsy naneho hevitra mikasika ireo fehezan-dalàna sasany tian'ireo mpikatroka hofoanana ny fitsarana. Nitarika ny Sendikan'ny Gazety Timor-Leste hanao fitakiana  tamin'ireo mpanao lalàna ny handrafetana lalàna vaovao amin'ny alalan'ny fandinihana miaraka amin'ny fakàna ny hevitry ny sehatry ny fampitam-baovao izany.
Hatramin'ny nanolorana ny lalàna tamin'ny taon-dasa, vondrona mpiaro ny fampitam-baovao isan-karazany manerantany no naneho ny ahiahiany sy ny fanoherany ilay fepetra. Manahy i Jane Worthington, Tale Vonjimaika Azia-Pasifika ao amin'ny Federasiona Iraisam-pirenena Hoan'ny Mpanoratra Gazety fa mety hanohintohina  ny fahaleovantena sy ny fahalalahan'ny mpanoratra gazety ao Timor Atsinanana ilay lalàna:
Ashlee Betteridge, Manampahefana Mpikaroka ao amin'ny Foibe Politikam-Pampandrosoana ao Aostralia nampatsiahy  amin'ireo manampahefana ao Timor Atsinanana ireo fanamby hafa maika kokoa atrehin'ny fampitam-baovao ankehitriny:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/18/64046/
 Lalàna mifehy ny gazety: http://www.laohamutuk.org/misc/MediaLaw/LeiImprensa25June2014en.pdf